Nidaamka Wareega Warshadda oo Dhan, Mashiinka Dahaarka ah ee Wajiga Kaliya - GOJON
Xirfadle, Caqli leh, Heer Sare
GOJON waxay ku taallaa magaalada Qingdao, Shiinaha, oo u heellan horumarinta alaabooyinka asaasiga ah sida nidaamka gudbiyaha warshadda oo dhan, Hal Waji Laminating line Smart, Nidaamka Maareynta Wax -soo -saarka etc. Iyada oo leh tayo aad u fiican oo badeecooyin ah, shabakad suuq geyn oo dhammaystiran iyo adeeg aad u wanaagsan, alaabtayada ayaa si wanaagsan loogu iibiyaa dalal badan sida Jarmalka, Talyaaniga, Spain, Greece, Russia, Belarus Japan, Thailand iyo India iwm, waxayna ku guuleysteen ammaan badan oo macaamiisha ah.
Waxaa la aasaasay 2008
13 sano oo waayo -aragnimo ah
In ka badan 20 badeeco
In ka badan 2 milyan
LS Taxanaha laminator xawaaraha sare iyo stacker
Faahfaahinta Farsamada - Xaashida kore iyo xaashida hoose ee is -bahaysiga; -Si toos ah xaashiyaha ugu sarreeya-xaashiyaha hoose ee kormeeraya-toosinta nidaamka xakamaynta hawl-wadeenka (lahaansho); - Suumanka nuugista faaruqinta ee geedi socodka gaadiidka oo dhan; - Waalka qaybinta oo la mid ah; - Meesha sare u qaadida aaladda quudinta hore; - Qaab-qabasho-hawleed badan oo loogu talagalay sabuuradda waraaqaha kala duwan; - Nidaamka dib -u -warshadaynta xabagta; - Jiho laba jibaar ah oo riixaaya diiwaanka dhinaca; - Si otomaatig ah ayaa loo xuli karaa/gacanta gacanta dib loogu dhigi karaa ...
Tilmaanta 1. Ka leexashada xaashida sare waxaa lagu sixi karaa nidaamka laba-servo, iyadoo bixineysa saxnaan sare, cabbirka horena si otomaatig ah ayaa loo xakameyn karaa. 2. Xaashida sare iyo xaashiyaha hoose waxaa isku waafaqsan diiwaanka hore inta lagu guda jiro socodsiinta, habkan aan joogsiga lahayn wuxuu bixiyaa wax soo saar aad u sarreeya. 3. Qaab dhismeedka makaanikada ayaa dammaanad qaadaya xaashida kore iyo xaashida hoose gudbinta isku midka ah. 4. Madaxa quudiyaha xawaaraha sare wuxuu bixiyaa waxqabad deggan oo lagu kalsoonaan karo. 5. ...
Gluer Folder Automatic 1226
Tilmaamaha 1. Xawaaraha suunka gudbiyaha ugu badan (m/min): 120 2. waxtarka ugu badan ee shaqaynta (bogag/min): 240 (waxay ku xiran tahay xaaladda dhabta ah) 3. wadarta awoodda korontada (kw): 20.2 (5-10KW oo ku hoos jira shaqada caadiga ah) ) 4. cabbirrada (L × W × H) (mm): 12640 × 4250 × 3000 (kuma jiraan qaybta xidhitaanka) 5. miisaanka guud (tan): qiyaastii 13.5 6. wuxuu dalbanayaa awoodda xusuusta (set): 250 (fidin) 7 . habka xakamaynta: PLC kantaroolka barnaamijka si otomaatig ah 8. Cabbirka bannaan: Max. Cabbirka (mm): 1200 × 2600, min. cabbirka (mm): 260 × 740; Ma ...
Gluer Folder Automatic 1228-S
Faahfaahinta farsamada - Dhismaha isku dhafan, unug kasta si madaxbannaan ayuu u shaqeyn karaa, wuxuu ku xirnaan karaa mashiinka daabacaadda oo wareegga rullaluudkiisu yahay 1000mm ~ 1200mm; - Si dhakhso leh u xulashada iyo beddelidda kala -dambaynta, u dabacsanaanta kala -dambaynta qaddar yar; - Cabbirka soosaarka Minium waa 135mm*135mm; - Naqshad gaar ah oo loogu talagalay xaashiyaha dhumucda iyo ka weyn; - Dhismo deggan oo la isku halleyn karo oo wax -soo -saar badan; - Dhammaan qaybaha dayactirka ee la xiriira waxay ka yimaadeen alaab caan ka ah dunida ...
Hal Waji Laminatin ...
Tilmaam * La shaqee labada dhinacba
Feature * Provi jir jeestay hal gabal ...
Lami xawaare sare leh Lami ...
Laminator Xawaare Sare SAL * Ugu badnaan. lamina ...
Cajalad keli ah * Gawaarida korontada ...
No Name Description 1 Cabirku wuxuu ku xiran yahay cu ...
Feature Isku -darka wada -wareegga ...
Feature Isku -darka silsiladda Guddiga ...
Warqadda Gawaarida Gawaarida ...
Nidaamka Gaadiidka Duubista Waraaqaha Waxgaradka ...
Module Belt Conve ...
Nidaamka gudbiyaha otomaatiga ah wuxuu dabooli karaa baahiyo kala duwan ...
Bixinta ugu Weyn ee Dibadda ee 2021
GOJON Gaadhsiiyaha Kartoonka Baabuurka ee Gawaarida iyo PMS Thailand Bilowga 2021, GOJON khadka tooska ah ee kaarboorka jiingadda ah iyo Nidaamka Maareynta Badeecadda ayaa soo afjaray wax -soo -saarkii oo si habsami leh u tijaabiyey. Qeybtan dhammeystiran ee xariiqa gudbiyaha ayaa annaga ahaan doonta ...
Waxaan rajeyneynaa warshadaha waraaqaha jiingada ee adduunka 2021
Sidaan wada ognahay, 2020, dhaqaalaha adduunka si lama filaan ah ayuu ula kulmaa caqabado lama filaan ah. Caqabadahaasi waxay saameeyeen shaqaalaysiinta caalamiga ah iyo baahida badeecada, waxayna caqabad ku keentay silsiladaha sahayda ee warshado badan. Si loo xakameeyo faafitaanka faafa, shirkado badan ayaa ...
Gawaarida Xamuulka qaada, Bangiga Erp, Nidaamka Rullaluudlaha, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, A3 Faylka Waraaqda,